About - Progressive Voice Myanmar
Home Our Work About Progressive Voice
Progressive Voice envisionsafederal democratic Myanmar that is free of discrimination and upholds the principles of peace, justice, self-determination and human rights.
Our mission is to amplify the voices from the ground foraprincipled, rights-based policy narrative on Myanmar atalocal, national and international level through cooperative, collaborative, and participatory research, analysis and advocacy.
Working and cooperating with disenfranchised, disempowered and marginalized communities and civil society organizations with mutual respect and recognition, to amplify their voices, and concerns, thereby filling the gap between policy needs on the ground and the policy-makers themselves;
Conducting independent, cooperative, collaborative and participatory research and analysis to provide relevant stakeholders and decision-makers with principled, rights-based policy recommendations; and
Advocating for institutional and structural reforms that comply with international human rights law and standards as well as Myanmar’s international commitments and obligations
‘Progressive Voice,’ or in Burmese, ရှေ့ပြေးအသံ ‘Shay Pyay Athan,’ was born out of Burma Partnership,anetwork of organizations throughout the Asia-Pacific region, advocating for and mobilizingamovement for democracy and human rights in Myanmar that was established in 2006.
ခွဲခြားဖိနှိပ်ဆက်ဆံမှုကင်းပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားမျှတမှု၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နှင့် လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံမူများအား ကိုင်စွဲကျင့်သုံးသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ မြန်မာနိုင်ငံ ပေါ်ထွန်းရေးအား မျှော်မှန်းသည်။
လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်သော မူဝါဒများ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော သုတေသန၊ သုံးသပ်ချက်နှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတို့မှတစ်ဆင့် အောက်ခြေလူထုအသံများကို ဒေသန္တရ၊ နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်တို့တွင် မြှင့်တင်ပေးသွားရန်ဖြစ်သည်။
ရှေ့ပြေးအသံသည် အရပ်ဘက်လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအား အခြေပြုကာ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အခွင့်အရေးကို အခြေခံသော မူဝါဒဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့ပြေးအသံမှ အောက်ခြေလူထုတို့၏ အသံများအား မြှင့်တင်ပေးကာ လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံသည့် မူဝါဒများ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာလူထုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နိုင်ငံအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများအကြား ပေါင်းကူးသဖွယ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
မိမိတို့ ရှေ့ပြေးအသံလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတို့၏ ကျောထောက်နောက်ခံမှာ လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့သည် အလုံးစုံခြုံငုံပြီး ခွဲထုတ်မရနိုင်သော အကြွင်းမဲ့ဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေးသဘောသဘာဝအား စွဲကိုင်ကာ မည်သူကိုမှ လူမျိုး၊ အသားရောင်၊ တိုင်းရင်းသား၊ လူမျိုးစု၊ လိင် သို့မဟုတ် ကျား/မရေးရာ၊ လိင်စိတ်ခံယူမှု၊ အသက်အရွယ်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ လူမှုရေးအဆင့်အတန်း၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့် နိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် အခြားသော ယုံကြည်မှုများအပေါ် အခြေခံသည့် မည်သည့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမျိုးမှ မလုပ်ဆောင်ပါ။
မိမိတို့အနေဖြင့် ကျား/မ အရေအတွက်မျှတစေရန်နှင့် မတူကွဲပြားမှုများပါဝင်ရေး ဝန်ထမ်းခန့်အပ်ခြင်းမူဝါဒအား ကျင့်သုံးသည်။ ထိုမူဝါဒ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အထူးသဖြင့် ခွဲခြားဖိနှိပ်ဖယ်ကြဉ်ခံအသိုင်းအဝိုင်းများမှ လူငယ်မျိုးဆက်များအား လက်ကမ်းကြိုဆို လက်တွဲပျိုးထောင်ခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းရေရှည်တည်တံ့ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် အားလုံးမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် မူကိုအခြေခံ၍ အများဆန္ဒအား ဦးတည်သည့် စုပေါင်းဆွေးနွးဆုံးဖြတ်သည့် စနစ်ကို အသုံးပြုပါသည်။
ရှေ့ပြေးအသံ၏ သုတေသနလုပ်ငန်းကို “မည်သူမျှ ထိခိုက်နစ်နာခြင်း မရှိစေရ” မူအား လက်ကိုင်ပြုကာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤသုတေသနအပေါ်အခြေခံ၍ မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီ၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများဘက်မှ ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲ လွတ်လပ်အမှီအခိုကင်းပြီး မူကိုအခြေခံသော သုတေသနပြုမှုနှင့် ခွဲခြားစိတ်ဖြာသုံးသပ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ပါသည်။
ရှေ့ပြေးအသံမှ ဦးစားပေး အကြောင်းအရာ (၃) ရပ်အား အဓိကထား လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာများမှာ –
(၁) အုပ်ချုပ်ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ – ထိုအထဲတွင် နိုင်ငံရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
(၂) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး – ထိုအထဲတွင် တရားမျှတမှု လက်လမ်းမီရရှိနိုင်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍများ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ အရပ်ဘက်လူထုအသိုင်းအဝိုင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများ၏ အလုပ်အား မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စသည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
(၃) ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု – ထိုအထဲတွင် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရေးတို့ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ရှေ့ပြေးအသံ၏ သုံးသပ်ချက်များ၊ ထုတ်ဝေမှုများနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအားလုံးတွင် လူ့အခွင့်အရေးအခြေခံ စံချိန်စံနှုန်းများကို ဗဟိုပြုသည်။
ခွဲခြားဖယ်ကြဉ် ဖိနှိပ်ခံအားနည်းသော အသိုင်းအဝိုင်းများ၊ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ အောက်ခြေလူထုအသံများ၊ ၎င်းတို့အလေးထားသည့် ကိစ္စရပ်များအား မြှင့်တင်ပေးကာ မူဝါဒရေးရာလိုအပ်ချက်များနှင့် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများကြား ရှိနေသည့် ကွာဟချက်အား ဖြည့်ဆည်းပေးသွားရန်၊
လွတ်လပ်အမှီခိုကင်းပြီး လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော သုတေသနနှင့် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာသုံးသပ်ချက်များ လုပ်ဆောင်ကာ သက်ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများအား လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီသော မူဝါဒရေးရာ အကြံပြုချက်များ ပံ့ပိုးပေးရန် နှင့်
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးဥပဒေနှင့် စံချိန်စံနှုန်းများ၊ နိုင်ငံတကာသဘောတူ စာချုပ်များ၊ ကတိကဝတ်များ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရန်။
“ရှေ့ပြေးအသံ” သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်လို “Progressive Voice” သည် မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလုပ်ဆောင်သည့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသတွင်းမှ အဖွဲ့များဖြင့် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကွန်ရက်အဖြစ် ချိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့ (Burma Partnership) မှ ပေါက်ဖွားလာသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ခဲ့သည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများနှင့် ပြည်တွင်းနှင့် နယ်စပ်အခြေစိုက် အရပ်ဘက်လူထုအသိုင်းအဝိုင်း အခင်းအကျင်းအပြောင်းအလဲများအပေါ် အခြေခံ၍ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု အယူအဆသည် ပိုမိုစုံလင်ကျယ်ပြန့်သည့် နယ်ပယ်အတိုင်းအတာသို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ နယ်စပ်အခြေစိုက်နှင့် သွေစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့များ၏ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဖွဲ့အဖြစ် အကျိုးဆောင်ရန် အပ်နှင်းခံရသည့် မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့၏ မူလတာဝန်သည်လည်း ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ပြောင်းလဲနေသော နိုင်ငံရေးနှင့် အရပ်ဘက်လူထုအသိုင်းအဝိုင်း အခင်းအကျင်းနှင့် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို ဆန်းစစ်၍ မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်ရာတွင် ခွဲခြား၊ ဖယ်ကြဉ်၊ ဖိနှိပ်ခံနှင့် အားနည်းသော လူထုအသိုင်းအဝိုင်းများ၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် အမြင်သဘောထားများကို အခြေခံ၍ ၎င်းတို့ကို ထင်ဟပ်သော မူဝါဒများ ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် ပြည်တွင်းအဆင့်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး လုပ်ဆောင်မည့် လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအား အခြေပြုသော သုတေသနနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု လိုအပ်နေသည်ဟု မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့မှ သုံးသပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာ့အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့၏ ရှိရင်းစွဲ အားသာချက်များနှင့် ကွန်ရက်များ၊ တန်ဖိုးထားမှုများနှင့် ပြောင်းလဲနေသည့် နိုင်ငံရေးနှင့် အရပ်ဘက်အသိုင်းအဝိုင်း အခင်းအကျင်းတို့အား အခြေပြု၍ အခွင့်အရေးနှင့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို အခြေခံသော မူဝါဒဆိုင်ရာ နက်နဲသည့် သုတေသန၊ ထိရောက်သည့် သုတေသနနှင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ရပ်ရွာလူထု အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မူဝါဒရေးဆွဲချမှတ်သူများအကြား ချိတ်ဆက်မှု ဖန်တီးပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ ရှေ့ပြေးအသံကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။